January 3, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 3rd, 2017'
Madaxweyne Gaas oo Maanta Dib Ugu Laabtay Magaalada Boosaaso, Kana Hadlay Isbedelada ka Socda Magaalada Muqdisho (VIDEO)
January 03, 2017 – Madaxweynaha Puntland mudane C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta dib ugu soo laabtay Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, ka dib markii uu ka dhoofay Magaalada Muqdisho oo toddobaadyadii la soo dhaafay uu ku sugnaa. Madaxweynaha Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in Magaalada Muqdisho uu u …
Shirkii Jaraa’id ee Madaxweyne Gaas (VIDEO)
Madaxweynaha Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in Magaalada Muqdisho uu u joogay dhameystirka arrimaha doorashooyinka dalka, iyadoo uu Madasha Qaranka ku ammaanay in meel wanaagsan ay soo gaarsiiyen arrimaha is bedelka dalka. Waxana uu sheegay inuu ifa-faalo wanaagsan uga muuqdo Xildhibaanada ku soo baxay Baarlamaanka, isla-markaana uu rajeynayo inay soo …
Maydad Weli Laga Soo Saarayo Goobtii Shalay ay Qaraxyada ka Dhaceen (SAWIRRO)
January 03, 2017 – Tirada geerida ee ka dhalatay qaraxyadii shalay ka dhacay nawaaxiga Hotel Peace ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sii korortay waxayna haatan tiradaasi gaaraysaa 9 qof. Lix dadkaas ka mid ah ayaa waxa ay ahaayeen dad rayid ah, iyadoo mid ka mid ah dadkaasi uu ahaa askari ka tirsan ciidamada amniga, halka …
Warshadii Kabaha ee Baraawe (VIDEO)
Taliyaha ayaa Xarunta ciidamada Amiso ee Xalane kulamo kala duwan kula qaatay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya, ku Xigeenka Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Taliyaha Ciidanka Amisom iyo Saraakiisha Ciidanka Uganda ee ku sugan dalka Soomaaliya. Taliye Katumba Wamala ayaa qoraal ku sheegay in Dowladda Uganda ay dooneyso in la xoojiyo tayada …
Taliyaha Ciidanka Dalka Ugandha oo Booqasho ku Jooga Magaalada Muqdisho (VIDEO)
January 03, 2017 – Taliyaha Ciidanka xooga dalka Uganda General Katumba Wamala ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin maalintii Isniinta ku yimid Magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa Xarunta ciidamada Amiso ee Xalane kulamo kala duwan kula qaatay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya, ku Xigeenka Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Taliyaha Ciidanka Amisom …
Booqashadii Taliyaha Dalka Uganda (VIDEO)
Booliska Dalka Turkiga oo soo Bandhigay Sawirka Ninkii Xasuuqa Gaystay Habeenkii Sanadka Cusub (VIDEO)
January 03, 2017 – Booliska dalka Turkiga oo weli baaritaan xoogan ugu jiro sidii ay gacanta ugu soo dhigi la haayeen ninka Baxsadka ah oo Habeenkii sanadka cusub weerarka xasuuqa ah ka gaystay goob maqaayad ah oo ku taalo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Hadaba ciidamada Sirdoonka ayaa ku guuleesteen inay soo bandhigaan Sawirka iyo …
Ninkii Weeraray Magaalada Istanbul (VIDEO)
Hadaba ciidamada Sirdoonka ayaa ku guuleesteen inay soo bandhigaan Sawirka iyo muuqaalka ninkii dadka badan ku laayay magaalada Istanbuul kaasi oo ku hubaysnaa qori AK-47 ah iyo Booshash badan. VIDEO – 1 \_ VIDEO – 2 Ninkaan oo wali baxsad ah ayaa waxaa la sheegay inuu u dhashay ama ka soo jeedo dalalka Kirgistan ama …
Weerarkii Lagu Qaaday Hotel Peace (VIDEO)
Weerarkani oo ay sheegteen Ururka Al Shabaab ee lagu qaaday Hotel Peace ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid kamid ah qaraxyadii ugu cuslaa ee ebed ka dhaca caasimadda Muqdisho. VIDEO – 1 \_ VIDEO – 2 Qaraxyadani ayaa loo adeegsaday labo gaari oo waaweyn, iyadoo gaarigii koowaad uu ahaa mid yar, iyadoo kii …